Забур 147 CARS - Nnwom 147 ASCB
Ɛyɛ sɛ wɔto ayɛyie dwom ma yɛn Onyankopɔn,
ɛyɛ fɛ na ɛfata sɛ wɔkamfo no!
Ɔboaboa Israel nnommumfoɔ ano.
3Ɔsa wɔn a wɔn akoma abotoɔ yadeɛ
na ɔkyekyere wɔn akuro.
4Ɔnim nsoromma no dodoɔ
5Yɛn Awurade so, na ne tumi yɛ kɛseɛ;
6Awurade wowa ahobrɛasefoɔ
na ɔtoto amumuyɛfoɔ hwe fam.
Momfa sankuo nto dwom mma yɛn Onyankopɔn.
ɔde osutɔ ma asase
ma ɛserɛ nyini wɔ nkokoɔ so.
9Ɔma anantwie aduane
na sɛ anene mma su a, ɔma wɔn aduane.
11Na mmom, Awurade ani sɔ nnipa a wɔsuro no,
wɔn a wɔde wɔn ho to nʼadɔeɛ a ɛnsa da no so no.
12Momma Awurade so, Ao Yerusalem;
kamfo wo Onyankopɔn, Ao Sion,
13ɔma wʼapono akyi adaban yɛ den
na ɔhyira wo nkurɔfoɔ a wɔte wo mu.
14Ɔma wʼahyeɛ so dwo
na ɔde ayuo amapa ma wo.
15Ɔsoma nʼahyɛdeɛ kɔ asase so;
16Ɔtrɛ sukyerɛmma mu sɛ odwan ho nwi,
na ɔpete obosuo nsukyeneeɛ sɛ nsõ.
17Ɔtoto asukɔtweaa gu fam sɛ mmosea.
Hwan na ɔbɛtumi agyina nʼawɔ denden no ano?
18Ɔsoma nʼasɛm no ma ɛnane no;
ɔhwanyane ne mframa, na nsuo tene.
20Ɔnyɛɛ yei mmaa aman foforɔ biara;
wɔnnim ne mmara.
ASCB : Nnwom 147